နက္ခတ်ဗေဒင်မှတ်စုများ: ကောင်းကင်တစ်ခွင် မြင်ယှဉ်နက္ခတ် (၃)
အနောက်တိုင်းသုံး သာယနစနစ်နှင့် အရှေ့တိုင်းသုံး နိယာယနစနစ်တို့တွင် သာယနသည် အီကွေတာပေါ် နေဖြတ်သန်းရာမှ ရာသီခွင်များကို စရေတွက်ပြီး၊ နိယာယနသည် နက္ခတ်၊ရာသီရုပ်များမှ စရေတွက်ကြောင်း ယခင်ပိုစ့်တွင် ဖေါ်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ထိုသို့စတင်ရေတွက်မှုနှစ်မျိုးသည် ကမ္ဘာဦးအစတွင် တစ်ထပ်တည်းကျခဲ့သည်။ ထိုတစ်ထပ်တည်းကျရာမှ တစ်စတစ်စ ဝေးကွာလာကာ ထိုအမှတ်နှစ်မျိုးတို့သည် နောင်တစ်ချိန် တစ်ထပ်တည်းဖြစ်ဖို့ နှစ်ပေါင်း 21600 နှစ်ကြာအောင် စောင့်စားရသည်။ ထိုသို့ ထပ်တူညီလိုက် ဝေးကွာလာလိုက်ဖြစ်သည်မှာ မရေမတွက်နိုင်အောင်ပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ ဝေးကွာလာသော ပမာဏအတိုင်းအတာကို အာယနအံသာဟုခေါ်သည်။
ထိုသို့ကွာခြားမှုကြောင့် နောင်တွင် မြန်မာတို့၏သင်္ကြန်သည် နွေကာလမှ တရွေ့ရွေ့ဝေးကွာလာကာ ဥတုအရ မိုးဥတုတွင်လည်း သင်္ကြန်ကျမည်။ ထိုမှဝေးကွာလာပါက ဆောင်းဥတုတွင်လည်း သင်္ကြန်ကျလာမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်များသည် ၂၃ ရက်ဝန်းကျင်မျှသာ ကွာခြားသေးသဖြင့် မသိသာပေ။ နောင်နှစ်ပေါင်း သောင်းချီလာသောအခါ ဆောင်းဥတုတွင် သင်္ကြန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ တချိန်တွင်လည်း ပြန်တစ်ထပ်တည်းကျဦးမည်ဖြစ်သည်။
လတ်တလော မှတ်သားလာသော အယနအံသာဇယားကို (MOTAA သင်ခန်းစာများမှ ရွေးထုတ်) ဖေါ်ပြရလျှင် အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
1984 ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ထိုအကွာအဝေး မည်မျှဖြစ်မည်နည်းဟု သိလိုပါက အချိုးချတွက်ပုံကို တင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
ခရစ်နှစ် 1980 တွင် အာယနအံသာသည် 23'35" ရှိသည်။ ဒသမအားဖြင့်ဖေါ်ပြသော် 23.58' ဖြစ်သည်။
ခရစ်နှစ် 2000 တွင် အာယနအံသာသည် 23'52" ရှိသည်။ ဒသမအားဖြင့် 23.87' ဖြစ်သည်။ 1980 ခုနှစ်မှ 2000 ခုနှစ်ကြား တစ်နှစ်အတွင်း အာယနပြောင်းလဲနှုန်းမှာ (23.87'-23.58')/100y=0.01417'/y ဖြစ်သည်။
1984 ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၃ ရက်၏ အာယနအံသာကို တွက်လိုသော် ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်သည် ထိုနှစ်အတွင်း ၃ ရက်ဖြတ်သန်းပြီးဖြစ်သည်။ ( ဥပမာ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၃ ဆိုလျှင် ဇန်န၀ါရီလ+ ၃ ရက်= ၃၄ ရက်ဖြစ်မည်။)
1984 သည် 1980 မှ4နှစ်ဖြတ်သန်းခဲ့သည်ဖြစ်သဖြင့် (အထက်ကရှာခဲ့သော တစ်နှစ်တာပြောင်းနှုန်းဖြင့် မြှောက်သော်) 4y*0.01417'/y=0.05668' ရသည်။
ထပ်မံ၍3ရက်ဖြတ်သန်းမှုကို တွက်ရန်3ရက်အား နှစ်ဖွဲ့သော် 3/365.25=0.00821နှစ် ရသည်။ ၄င်းကိုပင် တစ်နှစ်တာသွားနှုန်းဖြင့် မြှောက်ပါက 0.00821y*0.01417'/y=0.000116' ရသည်။
1984 ဇန် ၃= 1980ခုနှစ်+4နှစ်+ဇန် ၃= 23.58'+0.05668'+0.000116'=23.636'= 23' 38"10"' ဖြစ်သည်။
ထိုရက်တွင် 23'38" မျှ စနစ်နှစ်ခုတို့ကွာခြားနေသည်။ 1984 သည် 23.636' ခြားနားလျှင် 0' ခြားနားမှု သည် ခရစ်နှစ် ၅၀၀ ခန့်တွင်ဖြစ်မည်။ ထိုကွာခြားမှုကို ကောင်းကင်တွင် ကြည့်ကြပါစို့။
သက္ကရာဇ် 300 ခုနှစ်ရှိ ပုံဖြစ်သည်။ အနောက်တိုင်းစမှတ်သည် အမြဲတမ်း နေသွားလမ်း Ecliptic နှင့် အီကွေတာ Equator တို့ဖြတ်သော အမှတ်ဖြစ်သည်။
မိန်ရာသီ (Equator ပေါ် အလိုက်သင့်တည်ကာ ဒေါင်လိုက်တည်သော ငါးရုပ်) နှင့် မိဿရာသီ (သိုးရုပ်) ကြားသည် အရှေ့တိုင်းနစ် စရေသော အမှတ်ဖြစ်သည်။
အထက်ပါပုံတွင် ၄င်းတို့ တစ်ထပ်တည်းကျသည်။
အနောက်တိုင်း၏ စမှတ်သည် အီကွေတာနှင့် နေသွားလမ်းတို့ဖြတ်သော အမှတ်ပင်ဖြစ်သည်။
အရှေ့အတိုင်းစနစ်၏ စမှတ်သည်ကား အနောက်တိုင်းစမှတ်နှင့် ဝေးကွာသွားပြီဖြစ်သည်။ ၂၄ နာရီစာပိုင်းထားသော အကွက်နှင့် ၁ ကွက်ခွဲ တနည်းအားဖြင့် ၂၃ ဒီဂရီခန့်ဝေးသွားပြီဖြစ်သည်။
မိမိနှစ်သက်ရာ အချိန်အတွက်ကြည့်လိုပါက အောက်ပါပုံအတိုင်း စိတ်ကြိုက် ရိုက်သွင်းကာ ကြည့်ရှုနိုင်သည်။
အောက်ပါပုံအတိုင်း ကောင်းကင်နက္ခတ်ဂြိုဟ်များကို လှည့်ပတ်စေကာ စိတ်တိုင်းကျ အတိတ်ကိုပြန်၍လည်းကောင်း၊ အနာဂတ်ကိုကြို၍လည်းကောင်း မြင်တွေ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အောက်ပါပုံအတိုင်း နှစ်သက်ရာ နေရာအဆင်အပြင်ဖြင့် ရှုမြင်နိုင်သည်။
အောက်ပါပုံအတိုင်း ကမ္ဘာပေါ်က ဒေသတစ်ခုမှ ရှုမြင်နိုင်သည်။ အခြားဂြိုဟ်များမှလည်း ရှုမြင်နိုင်လေသည်။
နောက်ပိုစ့်များတွင် ရာသီရုပ်များနှင့် နက္ခတ်များကြည့်ပုံကို ဖေါ်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။
တစ်နေ.ထက်တစ်နေ.ကိုပခန်းရဲ.ရေးသားတင်ပြချက် တွေဟာ အရမ်းကိုးတိုးတက်လာတာမြင်ရလို. အထူး အားပေးပါတယ်။ အန်ကယ်ကိုယ်တိုင်ဒါမျိုးတွေ ရေးချင် ခဲ့သော်လည်း မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကိုပခန်းတို. လို ခေတ်လူုငယ်လေးတွေ အစွမ်းထက်ထက်ရေးသား ဖော်ပြထားတာတွေ.ရလို.ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကိုပခန်းရဲ.ဆက်လက်တိုးတက်မြင့်မားသောဍရေးသား တင်ပြချက် များ ပေါ်ထွန်းလါပါစေလို.လဲဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဦးရဲမြင့်၊ ခေတ္တ၊ ကတ္တမန္ဒူးမြို.
ှုအားပေးတာကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ ဆရာနျူမာန်ရှင်းထားတာတွေကို ခေတ်အမြင်နဲ့ပြန်တင်ပြခြင်းမျှသာ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ သိပ္ပံဆန်ဆန်တင်ပြမှုတွေကို ဒီလအတွင်းမှာသာ အင်တိုက်အားတိုက်ဖေါ်ပြသွားဖို့ရှိပြီး၊ အဟောပညာအတွက် ပရိယာယ်တွေကိုတော့ ၂၀၁၁ နှစ်ဦးပိုင်းကစ သုတေသနပြုသွားဖို့ ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ဆရာ။ သမ္ဘာနုသေးတာမို့ ပရိယာယ်ကဏ္ဍမှာ အကြံဥာဏ်များပေးဦး တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။